7 waxyaabood oo ku saabsan Covid-19 ee ah kuwa aad uga walwalaya hogaamiyaasha ganacsiga
London (CNN) Caymiska daba-dheeraanta ayaa ah welwelka ugu weyn ee laga qabo madaxda shirkadaha maadaama ay ka fikirayaan ka-bixitaanka cudurka faafa ee coronavirus. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah oo ka dhigaysa iyaga inay soo jeedaan habeenkii.
Saraakiisha fulinta shaqadooda ay tahay inay aqoonsadaan qatarta ayaa sidoo kale ka walaacsan kororka laxiriira lacagaha, heerarka sare ee shaqo la’aanta dhalinyarada iyo kororka weerarada internetka ee kadhaca guuritaanka unadhawaada meelaha fog, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen Golaha Dhaqaalaha Aduunka (WEF), Marsh & McLennan iyo Kooxda Caymiska Zurich.
Qorayaashu waxay daraasad ku sameeyeen ku dhawaad ​​350 xirfadlayaal sarsare oo khatar weyn oo ka yimid shirkadaha waaweyn ee adduunka. Sida lagu sheegay warbixinta, oo la daabacay Talaadadii, saddex meelood labo meel jawaab-bixiyeyaasha waxay qoreen hoos u dhac caalami ah oo dheeri ah "khatarta ugu badan" ee soo food saartay shirkadahooda. Qorayaasha warbixinta ayaa sidoo kale ku dhawaaqaya sinaan la'aanta sii kordheysa, daciifinta balanqaadyada cimilada iyo si xun u adeegsiga teknolojiyadda iyadoo ay jiraan qatarta ka imaanaysa masiibada Covid-19.
Sahanka waxaa la sameeyay labadii usbuuc ee ugu horreeyay ee Abriil.
Nidaamiyaasha siyaasadaha adduunka oo dhan ayaa hadda doonaya inay dhaqaalahooda ka saaraan isku-dabarida ay sababayaan murugada, dib u furitaanka meheradaha, iskuulada iyo gaadiidka, iyadoo xaddidaysa halista mowjadaha labaad ee cudurada ku qasbi kara xiritaanka cusub.
Hay'adda Lacagta Adduunka ayaa bishii la soo dhaafay sheegtay inay rajeynayso in GDP-ga caalamiga ahi uu qandaraas la yeelan doono 3% sanadka 2020, dhaqaalaha ugu hooseeya illaa iyo hoos u dhacii weynaa ee 1930-yadii.
"Covid-19 wuxuu yaraaday dhaqdhaqaaqa dhaqaale, wuxuu u baahan yahay trilyan doollar oo doolar oo loogu talagalay xirmada jawaabta waxayna u eg tahay inay sababi doonto isbedello qaab dhismeedka dhaqaalaha adduunka oo horay u socda, maaddaama waddamadu ay qorsheynayaan soo kabashada iyo soo nooleynta," ayay qoraayaasha warbixinta WEF.
Deyn dhisid waxay u egtahay inay culeys saari doonto miisaaniyada dowlada iyo isu dheelitirka shirkada sanado badan ... dhaqaalahan soo baxaya ayaa halis ugu jira inay galaan xaalad qoto dheer, halka ganacsiyadu ay la kulmi karaan adeegsiga xun, soosaarka iyo hanashada tartamada, "ayay raacisay. , oo farta ku haya welwelka masuuliyiinta ka soo gaadha tuugnimada baahsan iyo isku-darka warshadaha.
IMF waxay rajaynaysaa deynta dowlada ee dhaqaallaha horumarsan inay kordho 122% GDP sanadkaan laga bilaabo 105% sanadka 2019. Hoos udhaca jagooyinka maaliyadeed ee dhaqaalaha waa weyn waxay walaac ka muujisay 40% howl wadeenada la wareystay, iyadoo qorayaasha warbixinta ay soo jeedinayeen in qarashka maanta jira. waxay u horseedi kartaa da 'da' cusub oo ah raynrayn ama canshuur badan.
Markii wax laga weydiiyay waxyaabaha ay ka welwelsan yihiin ee adduunka, kuwa la sahamiyey waxay xuseen heerar sare oo shaqo la’aanta qaab-dhismeedka, gaar ahaan dhalinyarada, iyo cudur kale oo caalami ah oo ku faafa Covid-19 ama cudur faafa oo ka duwan.
Peter Giger, oo ah sarkaalka ugu sareeya ee Zurich ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku cambaareeyay.
"Cadaadis aad u weyn oo la xiriira shaqada iyo waxbarashada - in kabadan 1,6 bilyan oo arday ayaa ku seegaya dugsiga intii lagu guda jiray aafadda - waxaan wajaheynaa qatarta jiil kale oo lumay. Go'aannada hadda la qaadanayo ayaa go'aaminaya sida ay khatartaan ama fursadahaani u ciyaarayaan," ayuu raaciyay.
In kasta oo midnimada ay abuurayso cudurka faafa ee coronavirus uu bixiyo suurtagalnimada "dhisidda isku-duubni, wada-jir iyo bulsho isku mid ah," sida laga soo xigtay qorayaasha warbixinta, xasillooni darrida bulsheed ee ka dhasha sinaan la'aanta iyo shaqo la'aantu waa qatar soo ifbaxaysa dhaqaalaha adduunka.
"Kordhinta shaqada fog ee loogu talagalay shaqaalaha aqoonta sare leh waxay u badan tahay inay sii abuuri doonto isu dheelitir la'aanta suuqa shaqada iyo qiimo sare oo sii kordheysa oo loogu talagalay kuwa sida aadka ah u leh xirfadaha guur guura," ayay yiraahdeen.
Waxaa jira daliil hore u muujinaya in dadka dakhligoodu hooseeyo iyo soogalootiga ay yihiin kuwa xambaarsan horumarka dhaqaale ee ka imanaya tallaabooyinka xiridda.
Warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in horumarka laga gaadhayo ballanqaadyada deegaanka uu hakad geliyo. In kasta oo dhaqamada shaqada iyo aragtida cusub ee safarka laga yaabo inay sahlanaato in la hubiyo soo kabasho hoose, "ka tagida shuruudaha joogtaynta ee dadaallada soo kabashada ama ku soo noqoshada qulqulka dhaqaalaha adduunka" ayaa halis ugu jirta inay carqaladeeyaan u gudbidda tamar nadiifka ah, qorayaasha ayaa sidaas leh.
Waxay ka digayaan in ku tiirsanaanta weyn ee teknolojiyadda iyo sida ugu dhakhsaha badan looga baxo xallinta cusub, sida baafinta xiriirka, waxay "caqabad ku noqon kartaa xiriirka ka dhexeeya teknolojiyadda iyo dowladnimada," iyadoo saameynnada ugu dambeysa ay bulshada ku leeyihiin kalsoonida ama si qaldan.
Waqtiga boostada: May-20-2020